ဒေါသထွက်ရင်ဘာကြောင့်အော်သလဲ | Danya Wadi
Posted by danyawadi on March 8, 2016 in ဆောင်းပါးများ
ဟိန္ဒူသူတော်စင်တစ်ဦးဟာ တပည့်သာဝကတွေနဲ့အတူ မြစ်ကမ်းတစ်ခုကိုရေချိုးဆင်းလာပါတယ်… အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းမှာ မိသားတစ်စုဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒေါသထွက်ပြီး အပြန်အလှန်အော် ဟစ် ပြောဆိုနေကြပါတယ်… သူတော်စင်က သူ့တပည့်တွေ ဘက်လှည့်ပြီး အပြုံးလေးနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ်…
“လူတွေ စိတ်တိုတဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့် အော်ဟစ်ပြော ဆိုကြတာလဲ…”
တပည့်တွေက အချိန်အတန်ကြာစဉ်းစားနေကြပါတယ်… သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကပြောတယ်…
“ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ် သက်သက်မထားနိုင်တော့ဘူးလေ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အော်ကြတာပေါ့…”
“ဟုတ်ပြီ… ကိုယ့်ဘေးနားမှာတင်ရှိနေတဲ့လူကိုကော ဘာကြောင့် အော်ပြောနေကြတာလဲ… မင်းပြောချင်တာကို ဖြည်းဖြည်းပြောလို့လည်း ကြားနေရ နေတာပဲ…” သူတော်စင်က ပြန်မေးပါတယ်…
တပည့်သာဝကတွေက တခြားအဖြေတွေ အမျိုးမျိုး ထပ်ပေးကြပါသေးတယ်…
ဒါပေမဲ့ တခြားသာဝက တွေကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေမျိုး မပေးနိုင်ကြပါဘူး… နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းပြ ပါတယ်…
“လူနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်တဲ့အခါ သူတို့နှလုံးသားတွေဟာ ဝေးကွာသွားတယ်… အဲ့ဒီအကွာအဝေးကနေကြားနိုင်ဖို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အော်ပြောနေကြရ တာ ပါပဲ… သူတို့ဒေါသပိုထွက်လေလေ သူတို့ကြားက အကွာအဝေး ပိုများလာလေလေဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးကျယ်ကျယ်အော်ပြောရလေလေပါပဲ…”
“လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေတ္တာရှိ တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်လဲ… သူတို့ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အော်ဟစ်ပြီးမ ပြောကြပါဘူး…
နူးနူးညံ့ညံ့ညင်ညင်သာသာနဲ့ ဖြည်းဖြည်း ပဲ ပြောကြပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့နှလုံး သား ချင်းအရမ်းနီးကပ်သွားပြီလေ… သူတို့ကြားထဲကအကွာအဝေးဟာ အရမ်းနည်းပြီး မရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားလို့ပါပဲ…”
သူတော်စင်က ဆက်ရှင်းပြပါတယ်… “သူတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းချစ်သွားတဲ့ အခါကျရင်ကော ဘာဖြစ်လာမလဲ… သူတို့စကားကိုမပြောတော့ပါဘူး… လေသံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောဆိုကြပါတယ်… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အချစ်ကြောင့် အရမ်းနီးကပ် သွားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ သူတို့လေသံလေးနဲ့တောင် ပြောနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကြည့်နေရုံလေးနဲ့ကို နားလည်နေနိုင်ကြပါပြီ….
ဒါဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်သွားကြတဲ့အခါ လူနှစ်ယောက်ဘယ်လောက်နီးကပ်သွားသလဲဆိုတာပါပဲ.
သူတော်စင်က သူ့တပည့်သာဝကတွေကိုကြည့်ပြီး ပြောပါတယ်…
“ဒါကြောင့် မင်းတို့စကားများတဲ့အခါမှာ မင်းတို့ရဲ့နှလုံး သားတွေကို မဝေးကွာစေပါနဲ့… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုဝေးကွာစေမယ့် စကားမျိုး ကိုလည်း ထပ်မပြောပါနဲ့…
ဒါမှမဟုတ်ရင် မင်းတို့ကြားက အကွာအဝေးဟာ အရမ်းကြီးမားပြီး ပြန်လည်ဆုံဆည်းဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ တစ်နေ့ကို ရောက်ရှိသွားပါ လိမ့်မယ်…”
← ခွေးတောက်ရွက်၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုပုံ
ဆီးအတွက် လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်ပါ →